अष्ट्रेलियाको भीसा प्रक्रियाका लागि किन अनुभवी माईग्रेसन एजेन्ट छान्न जरुरी छ ? - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | २८ भाद्र २०७३, मंगलवार ०६:३४ |
मेलबर्न । अष्ट्रेलियाको भीसाबारे निर्णय गर्ने कुरामा माईग्रेसन एजेन्टको कुनै भूमिका हुँदैन । तर सही माईग्रेसन एजेन्ट छान्न सके उसले भीसाको निर्णय सकारात्मक आउने वातावरण बनाउन भने सक्छ । अर्थात माईग्रेसन एजेन्टको अनुभवको आधारमा भीसाको प्रक्रियालाई सहज र सकारात्मक बनाउन सक्छ ।
त्यसैले माईग्रेसन प्रक्रिया सुरू गर्दा सही एजेन्टको छनौट गर्न आवश्यक छ । किनभने अनुभवी माईग्रेसन एजेन्टले आवश्यक कागजात र प्रक्रिया उपयुक्त ढंगमा मिलाउन सक्छन् । भीसा प्रक्रियाका लागि यो आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ ।
अष्ट्रेलिया आएका नेपाली मध्ये कतिको माईग्रेसन प्रक्रिया सजिलै सकिएको छ भने कतिको झन्झटिलो रूपमा अघि बढेको होला । अष्ट्रेलियाको पीआर पाउने आशामा पाँच सात वर्ष देखी ४५७ (कामदार) भीसामा बँधुवा कामदारको रूपमा पिल्सेर बसेकाको संख्या पनि उल्लेख्य छन् । पीआरको लागि कागत बन्ने आशामा उल्टो ५०–६० हजार डलर तिरेर ४५७ मा बसेकाहरूलाई पैसा पनि लिने र काम पनि लगाउने नेपाली तथा भारतीय होटल, रेस्टुरेन्ट मालिकहरु पनि छन् । माईग्रेसन एजेन्टको गलत सुझाव तथा गलत माईग्रेसन एजेन्टको छनौटको परिणाम हुन् यी ।
त्यसैले सही सुझाव पाउन र पीआरको प्रोसेस छिटो टुंग्याउँन अनुभवी माईग्रेसन एजेन्टको छनौट गर्न आवश्यक छ ।
Previous‘छक्का पञ्जा’ का नायक अर्यान सिग्देल,किन लुकाइयो ?
Nextएनआरएनएका अध्यक्ष शेष घले र अष्ट्रेलियाका नेपाली समुदायबीच अन्तर्कृया
अष्ट्रेलियाको पीआर अष्ट्रेलियन नागरिकता सरह हुन्छ ?
१० भाद्र २०७४, शनिबार ०२:४४
२९ मंसिर २०७३, बुधबार ०२:३५